Tsy alehany ! | NewsMada
Petatoko, vonjy tavanandro, afo am-bilanikely, ronono an-tavy,… Lava ny lisitra. Izany ity fitondrana ity. Izany ny fanaony, ny fomba fiasany hatramin’izay, mandraka izao. Betsaka ny fisehoan-javatra eny amin’ny fiarahamonina eny azo itsarana.
Tsy haka ohatra betsaka fa indreto vitsivitsy ihany, ampy hanamarinana ireo. Iray amin’ireny ity fanamboaran-dalana eto an-dRenivohitra sy ny manodidina ity. Tsy misy izay tsy mikaikaika amin’ny fitohanan’ny fifamoivoizana. Henjana, tena henjana ! Tena mampiteny ny moana, araka ny fitenenana. Adiny iray, adiny roa, adiny telo, na maherin’izany aza vao tonga any amin’izay aleha. Fahoriana ny mianjady amin’ny maro ; ny mpianatra, ny mpiasa, ny olon-tsotra… Vao mivoaka ny trano dia efa valaka kivy ambony ihany. Indrindra moa fa rehefa hamonjy fodiana amin’ny hariva. Raha tsy danihin’ny masoandro sy ny hafanana amin’ny antoandro, hotsaky ny orana amin’ny hariva.
Inona anefa ity hoe fanamboaran-dalana atao amin’izany ? Asa petatoko, tsy misy ilana azy. Toa vola afafy sy ariana eny am-baravarankely, araka ny fitenenana. Volan’izy anefa ireny ? Volam-panjakana, volam-bahoaka ihany. Volan’ny mpandoa hetra. Izay fanaraha-maso tsy misy akory. Manao izay saim-pantany eo ireo mpiasa kelin’ny orinasa hoe voafidy hanao ilay asa. Asa, iza loatra ny mba tompon’andraikitra amin’ireny ?
Rariny dia rariny raha tezitra ny vahoaka. Raha mahafaty ny ompa, ny fimonomononana… re eny ambony taxi-be eny, efa betsaka ireo nitsipatsipaka. Tsy mahagaga koa, etsy andanin’izany, raha tonga ny gaboraraka. Tsy hita hifanomezan-tsiny intsony izany. Ganagana milomano ka samy manao izay mahafinaritra ny sainy. Dia toy ny manala azy, araka ny fitenin-jatovo fotsiny sisa.
Ohatra iray amin’ny tranga maro ihany io. Mampiseho ny tsy fahaiza-manaon’ity fitondrana ity, araka iretsy toetra voalaza etsy ambony iretsy. Tahaka ny inona anefa ny fisehosehoana etsy sy eroa. “Miasa ho anao ny fanjakana”, “Fisandratana mirindra”… Fampandriana adrisa, fampiesonana no betsaka. Tsy ilaina takarina lavitra akory izany fa tsapan’ny maro. Midina eny rehetra eny raha te hanamarina. Topazo maso ihany koa ireo fanehoan-kevitry ny olona any anatin’ireny tambajotran-tserasera ireny. Fehiny, tsy azo ampiresehana sy fahanan-dalitra intsony izao ny vahoaka. Manana ny heviny sy ny fahatsapany ny fiainam-pirenena ataon’ity fanjakana tsy alehany ity izy ireo na tsy mivolana aza.